Kim Yo Jong oo booqasho ku tageysa xadka u dhaxeeya Koonfurta ... | Universal Somali TV
Kim Yo Jong oo booqasho ku tageysa xadka u dhaxeeya Koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya
Gabadha la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Mr Kim Jong Un ayaa booqan doonta galinka danbe ee maanta waqtiga dalkaas xadka u dhaxeeya labada Kuuriya si ay u sharafto geerida marwadii hore ee kuuriyada koonfureed Lee Hee-ho oo Geeriyootay.
Kim Yo Jong ayaa booqan doonto deegaanka xadka ah ee Panmunjom, oo ay kula kulmi doonto saraakiil sare oo ka tirsan dowlada ay dariska yihiin.
Qabarkaan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay wasaarada mideynta kuuriyada Koonfureed.
Kulanka ay isku arki doonaan mas,uuliyiinta labada kuuriya ayaa imaanaya hal sano kadib kulankii ay sanadkii hore yeesheen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Ms Lee oo geeriyootay maalintii isniinta ayaa aheyd carmalad u dhaxday madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed Kim Dae-jung, kaasi oo noqday hogaamiyihii ugu horeeyay oo booqda kuuriyada waqooyi kadib dagaalkii dhaxmaray labada dal sanadkii 1950 ilaa iyo 1953-dii.
Seyga Lee ayaa sidoo kale jeclaa midnimada labada wadan waxaana uu booqday dhowr jeer oo ay ka mid tahay sanadkii 2011-kii uu uga qeyb galay aaska hogaamiyihii hore ee kuuriyada waqooyi Kim Jong Il.
Kim Yo Jong ayaa inta ay joogto fiidnimadaan waxaa la filayaa in ay u dirto fariimo ubax ah oo ay ugu tacsiyadeyneyso geerida ku timid Lee Hee-ho.
Kan-xigaNin Tanzaaniyaan oo lagu helay ka Gan...
Kan-horeXuutiyiinta Yemen oo weerar ku qaaday...
53,450,460 unique visits